एक्सरे मेसिन बिग्रदा गलकोटवासी समस्यामा | MYAGDINEPAL
Home / समाचार / एक्सरे मेसिन बिग्रदा गलकोटवासी समस्यामा
एक्सरे मेसिन बिग्रदा गलकोटवासी समस्यामा
बागलुङ, असार १५ ।
बागलुङको गलकोट क्षेत्रमा रहेको एकमात्र स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन मर्मत नहुँदा बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । गलकोटको हरिचौरस्थित गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको एक्सरे मेसिन विगत दुईवर्षदेखि मर्मत नहुँदा बिरामीहरु मर्कामा परेका हुन् ।
एक्सरे मेसिन मर्मत नहुँदा उचारका लागि निजी अस्पताल वा जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारनै जानुपर्ने बाध्यता रहेको बिरामीहरुले बताउँछन् । एक्सरे मेसिन मर्मत नगर्दा हाडजोर्नी र छातीको समस्यामा आउने बिरामीहरुलाई सहज उपचार गर्न नसकिएको स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल असिस्टेन्ट डा. त्रिभुवन भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मासिक ४० भन्दा बढी बिरामीहरु एक्सेर गर्नुपर्ने खालका आउने गरेपनि एक्सरे गर्न नसक्दा उपचार नगरी निजी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रमा दिएको एक्सरे मेसिन पुरानो मोडलको भएको र पटक पटक मर्मत गर्दा समेत बिग्रिराख्ने समस्या भएको स्वास्थ्य केन्द्रले बताएको छ । ‘म आएको एक वर्ष भयो, म आउनुभन्दा अगाडिनै विग्रिसकेको थियो । मेसिन मर्मतका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जानकारी गराएपनि मर्मत भएको छैन् ।’ डा. भण्डारीले भन्नुभयो ।
मेसिन मर्मतका लागि राजधानीबाटै मेकानिकलहरु ल्याउनुपर्ने र खर्च बढी लाग्ने भएकाले पनि मर्मतमा समस्या भएको जिलला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक महेश्वर श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रेष्ठले आफूलाई फुर्सद नभएकाले फुर्सद भएको बेलामा प्राविधिक बोलाएर मेसिन मर्मत गराउनु समेत बताउनुभयो । एक्सरे मेसिन १५ वर्ष अगाडि जडान गरिएको र अब मर्मत गरेरपनि चल्न नसक्ने स्वास्थ्य केन्द्रका व्यवस्थापन समितिका पुर्व अध्यक्ष फमलाल न्यूरेले बताउनुभयो ।